Nzira isiriyo yekubhadhara Pane iPhone? Heino Iyo Chaiyo Kugadzirisa! - Iphone
Ndeipi nhanho yekusimbisa apple
chitoro changu cheapp hachisi kushanda
iphone yangu inotangazve yega
sei kugadzirisa iphone 5 bhatani repamba
Nzira isiriyo yekubhadhara Pane iPhone? Heino Iyo Chaiyo Kugadzirisa!
Yako iPhone inoti yako yekubhadhara nzira haina basa uye hauna chokwadi nei. Iye zvino haugone kutenga muTunes kana App Store! Muchinyorwa chino, ndicha tsanangura nei ichiti Invalid Payment Method pane yako iPhone uye kukuratidza maitiro ekugadzirisa dambudziko racho zvakanaka .
Gadziridza Ruzivo Rwekubhadhara
Chimwe chezvikonzero zvakajairika nei ichiti Invalid Payment Method pane yako iPhone inyaya yekuti unofanirwa kugadzirisa ruzivo rwako rwekubhadhara. Zvinokwanisika nzira yako yazvino yekubhadhara yapera uye inoda kuvandudzwa. Kana iwe uchangobva kuwana kiredhiti kadhi nyowani, iwe ungangoda chete kugadzirisa kadhi rako rekupera zuva uye nhamba yeCVV!
Vhura Zvirongwa uye tora paZita Rako kumusoro kwechiso. Wobva wadzvanya Kubhadhara & Kutumira uye nyora yako Apple ID password.
Tevere, tinya pane yekubhadhara nzira yaungade kugadzirisa. Iwe unogona kana kugadzirisa ruzivo nezve kadhi, kana kupururudza zvese nzira pasi uye tap Chinja Maitiro Ekubhadhara kana uine kadhi idzva.
Paunenge wagadzirisa ruzivo rwako rwekubhadhara, tapira Sevha mukona yekumusoro-kurudyi kona yekona.
Bhadhara Chero Asiri Kubhadharwa Mabhiri
Iwe haungakwanise kutenga zvitsva pa iPhone yako kana uine chero asina kubhadharwa mabhiri kana kunyoreswa. Vhura Zvirongwa uye tinya pa Zita Rako -> iTunes & App Store .
Tinya pane yako Apple ID, wobva wadzvanya View Apple ID uye isa password. Tinya Nhoroondo yekutenga kuti uone kana paine chero asina kubhadharwa kutenga pane yako iPhone. Kana iwe uine chero zvaunenge usati wabhadhara, tora pavari kuti uvandudze ruzivo rwako uye uite muripo.
Saina Kunze Kwako Apple ID uye Log In Zvakare
Kana ruzivo rwako rwekubhadhara rwuri rwechizvino uye iwe usina chero chausina kubhadhara kutenga, inguva yekugadzirisa nyaya neApple ID yako. Imwe yekukurumidza nzira yekugadzirisa diki glitch neako Apple ID ndeyekubuda kunze uye kudzokera kuaccount yako.
bhatani repamusoro pane iphone 4 isiri kushanda
Vhura Zvirongwa uye tora paZita Rako kumusoro kwemenu. Mupumburu pasi uye vawane Buda kubuda muApple ID yako.
Kuti usayine zvakare muApple ID yako, vhura Zvirongwa uye tinya bhatani reKusaina kumusoro kwechiso.
Kana ichiri kuti Invalid Payment Method pane yako iPhone, inguva yekubata Apple rutsigiro. Dzimwe nyaya dzeApple ID dzakaomesesa uye dzinogona kugadziriswa chete neyepamusoro-chikamu Apple mutengi webasa mutengi.
Kushanya Webhusaiti yekutsigira Apple kuronga musangano kuchitoro padyo newe kana kusvika parunhare nemumiriri webasa revatengi.
Watsigira nzira yekubhadhara pane yako iPhone uye unogona kuita iTunes neApp Store kutenga zvakare! Iye zvino unozoziva chaizvo zvekuita nguva inotevera painoti Invalid Payment Method pane yako iPhone. Inzwa wakasununguka kusiya chirevo pasi pazasi kana iwe uine chero mimwe mibvunzo nezve yako iPhone!